Inona no Point Of The Fanambadiana?
amin'ny Veranda Hillard
Last nohavaozina: Jan. 06 2018 | 2 min namaky
Ankoatra ny antony ara-pivavahana, fomba nentim-paharazana, olona manambady amin'ny ezaka hihamafy fanoloran-tena mandritra ny fiainana manontolo ho iray hafa. Nanomboka tamin'ny faran'ny taonjato faharoa-polo, nisy ny fihenan'ny ao amin'ny fanambadiana sy ny, ankapobeny, ny olona maro ny hanambady any aoriana any noho ny taranaka teo aloha. Na dia teo aza izany fironana vaovao, Kefalas e. ho amin'ny. ao amin'ny lahatsoratra "Ny fanambadiana dia mihoatra noho ny hoe Miara-" , fa olon-dehibe mbola tanora sarobidy ny fanambadiana, ary mahita izany ho toy ny ampahany mendrika ny hoavin'izy. Amin'izao fotoana izao, dia mety ho hafa ny lalana unconventional hisafidy fa tsy famatorana ny fatotra, na izany aza, dia mbola maro ny tombontsoa tokony ho azo amin'ny hanambady.
Ny fanambadiana olombelona manatanteraka 'zava-dehibe ilaina ny fifandraisana akaiky. Ny tena tsara, ny mpivady miara-miaina ny fiainana ary nomena ny fahafahana manana olona afa-tsy izy ireo rehefa mihantitra. Strong sy. al., ao amin'ny boky "Ny Fanambadiana sy ny Fianakaviana Experience: Fifandraisana akaiky amin'ny Fikambanana Manova "manazava fa ny fanambadiana sy ny fiainam-pianakaviana izay miavaka dia ny loharanom-baovao avy amin'ny olona iray ny fiarovana sy ny fihetseham-po no mahazo fanohanana. Amin'ny alalan'ny fanambadiana, Mety ho mpiara-mitory roa hizara ny fanantenana sy ny nofinofy akaiky ho amin'ny ho avy sy hahita fampiononana nandritra ny fiainana sarotra traikefa.
General Fahasalamana sy ny Fahasambaranao
Ny fanambadiana dia manome na ara-batana sy ara-tsaina tombontsoa sy ny olona amin'ny ankapobeny, izay manambady salama sy afa-po kokoa. Ankoatra izany, ny lafiny fanohanana ara-tsosialy ny fanambadiana dia manome miaro lafin-javatra avy amin'ny alalan'ny terminal ny aretina. Mpikaroka sy Aizer. al., ao amin'ny fianarana "Mbola mpivady Status sy ny mararin'ny kansera", hita fa ny olona manambady dia tsy azo inoana ny hanolotra homamiadana, kokoa ny hahazo fitsaboana, ary azo inoana kokoa fa ho faty avy amin'ny aretina noho ny tsy manambady ny olona. Marina izany ho an'ny isan-karazany ny kansera, toy ny tratra, havokavoka, prostate, colorectal sy ny alalan'ny terminal aretina.
Salama kokoa ny ankizy sy ny fianakaviana
Ny fanambadiana naorina ho toy ny fitaizan-janaka andrim-panjakana ary mbola manompo ny tanjoko anio. Na dia azo antoka fa azo atao ny manangana ny ankizy irery, ara-drariny kokoa ny ankizy, rehefa natsangana ao an-tokantrano miaraka amin'ny ray aman-dreny. Ao amin'ny fianarana, "Low-fidiram-bola Reny’ Partnership lamina ny korontana sy ny tanora’ Tsosialy sy ara-pihetseham-po ", Bachman sy. ho amin'ny. fa ny ankizy izay mihalehibe ao amin'ny tokantrano roa-ray aman-dreny tsy fandikan-dalàna sy ny fampirantiana-manao zavatra avy fitondran-tena noho ny ankizy nandritra ny zatovo hatsangana amin'ny ray aman-dreny tokan-tena-na cohabitating tokantrano. Zavatra eo amin'ny ray aman-dreny roa-tokantrano toy ny ray anjara sy ny fahasahiranana ara-bola vitsy manome fahamarinan-toerana kokoa noho ny fampitomboana ny ankizy.
Ny fanambadiana dia manome fiarovana ara-bola lehibe kokoa mihoatra noho ny ho tokan-tena, na tsy manam-bady. Ankoatra ny mazava hoe paychecks roa noho ny iray, manambady maro ny olona manana tombony ara-toekarena. Mpivady hangoron-karena sy ny fananany noho ny tsy manambady ny olona haingana kokoa. Ankoatry ny, ao amin'ny lahatsoratra "Izaho ve ... Te Save", Knoll sy. ho amin'ny. mamaritra fa ny mpivady tanora dia azo inoana fa mandray anjara amin'ny mpampiasa kaonty fisotroan-dronono ara-olona noho ny tokan-tena. Drafitra ara-bola mihevitra fa aloha eo amin'ny fiainana dia predictor ny sata ara-toekarena any aoriana any lafin-javatra io no faran'izay handraisan-tsoa ho an'ny mpivady.